Horudhac: Brighton & Hove Albion vs Liverpool… (Seagulls oo aan waligood garaacin kooxda difaacanaysa horyaalka) – Gool FM
Horudhac: Brighton & Hove Albion vs Liverpool… (Seagulls oo aan waligood garaacin kooxda difaacanaysa horyaalka)
Haaruun November 28, 2020
(Brighton) 28 Nof 2020. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa fursad u haysata inay u dhaqaaqdo halka ugu sarreysa horyaalka Premier League marka ay u safrayaan galabta garoonka the Amex Stadium, halkaasoo ay kula ciyaari doonaan naadiga Brighton & Hove Albion.
Kooxda xafidanaysa horyaalka Premier League ayaa fadhisa kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka, inkastoo ay ku dhibco yihiin kooxda Tottenham Hotspur, laakiin waxaa looga sarreeyaa farqiga goolasha.
Reds waxa ay u baahan tahay inay guul ka gaarto Brighton si ay galabta hoggaanka ugu qabato horyaalka Premier League.
Taariikhda: Sabti 28 Nof 2020
Daafaca Brighton ee Tariq Lamptey ayaan la heli doonin kulankan, sababo la xiriira ganaax uu la maqan yahay.
Davy Propper ayaa markale diyaar ah kaddib calool xanuun uu la maqnaa, laakiin Alexis Mac Allister inkastoo uu ku soo laabtay tababarka maadaama laga helay Korona Fayris, haddana ma soo muuqan doono.
Weeraryahanka Liverpool ee Mohamed Salah ayaysan u badnayn inuu ku soo bilaaban doono safka hore kaddib markii uu ka soo laabtay karaantiilkii uu ku jiray kulankii Atalanta.
Jordan Henderson ayaa ka maqnaa Arbacadii kooxda Redsa sababo la xiriira dhibaato muruqa ah, laakiin waxa uu ku soo laabtay tababarka, wuuna ciyaari karaa.
>- Liverpool ayaa ku socota sagaal guul oo isku xiga inay ka gaarto Kooxda Brighton tartammada oo dhan, iyadoo dhalisay 27 gool muddadaas.
>- Seagulls ayaan wax guul ah gaarin 11 kulan ee tartan rasmi ah oo ay la ciyaareen Liverpool tan iyo guushii 2-0 ee ay ku gaareen garoonkooda wareegga afaraad ee tartanka FA Cup bishii Janaayo 1984-kii.
>- Brighton waligeed ma aysan guuleysan kulan ay garoonkeeda kula ciyaartay Liverpool, waxaana ay kala soo kulantay saddex barbaro iyo afar guuldarro.
>- Albion ayaa gaartay guushii ugu horreysay ee Premier League todobo isku day isbuucii hore, waxaana ay u hanqal taagayaan inay badiyaan kulammo isku xiga ee horyaalka markii ugu horreysay muddo ka badan sanad.
>- Waxay sameyn karaan rikoor toos ah oo kooxda ah Sabtida maanta, kaasoo ah in sagaal kulan oo isku xiga ee garoonkooda lagu ciyaaray aan wax guul ah gaarin.
>- Seagulls ayaan waligood garaacin kooxda difaacanaysa horyaalka, labo jeer barbaro ayey la gashay 12 jeerna waa laga badiyay.
>- Brighton toddobadiisii gool ee ugu dambeeyay Premier League waxaa u dhaliyay toddobo ciyaartoy oo kala duwan.
>- Danny Welbeck ayaa kaliya dhaliyay hal gool 16 kulan oo uu ka horyimid Liverpool tartammada oo dhan.
>- Liverpool ayaa laga yaabaa inay tagto afar kulan oo isku xigta oo Premier League ah oo ay bannaanka ku soo ciyaaraan iyagoo aan wax guul ah gaarin markii ugu horreysay tan iyo shan kulan oo xiriir ah intii u dhexeysay Janaayo iyo Maarso 2017.
>- Waxay kaliya guuleysteen saddex ka mid ah 10-kii kulan ee ugu dambeeyay ee ay martida ahaayeen, waxaana ay haystaan 3 barbaro iyo 4 guuldarro.
>- Reds ayaa ah kooxda kaliya ee gool dhalisay dhammaan kulammadii ay ciyaartay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
>- Liverpool ayaa laga yaabaa inay shabaqeeda ilaashato kulammo isku xiga ee Premier League ah markii ugu horreysay tan iyo bishii June.
>- Kooxda Jurgen Klopp ayaa laga badiyay afar kulan oo horyaalka ah sannadka 2020, waana in la mid ah intii laga adkaaday isku dar sanadihii 2018 iyo 2019.
>- Mohamed Salah ayaa si toos ah ugu lug yeeshay siddeed gool lixdii kulan ee Premier League ee uu ka horyimid Brighton, isagoo dhaliyay shan gool, saddex kalena caawiye ka ahaa.
>- Diogo Jota ayaa dhaliyay labo gool booqashadiisii ugu dambeysay Premier League ee Brighton, laakiin tan iyo markaas kaliya hal gool ayuu dhaliyay 13 kulan oo Premier League ah oo uu marti u ahaa.
Horudhac: Manchester City vs Burnley… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka maanta ka dhacaya garoonka Etihad)